ऋण लिन चिनेकै मेनेजर चाहिन्छ भन्ने सोँच अझै हटेको छैन
बाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुको आक्रामक बजार विस्तार नीति लिएका छन्, यस्तो अवस्थामा फाइनान्स कम्पनीहरुले कसरी आफ्नो अस्थित्व जोगाईरहेका छन् ?
बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको आ आफ्नै बिशेषता र कार्य क्षेत्र छन् । डार्बिनको ‘सर्भाइवल अफ फिटेस्ट’को सिद्धान्त अनुसार नै ओपन लाइसेन्स पोलिसी आएको थियो । यसले निजी क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तिय कम्पनीको लाइसेन्स दियो । त्यति बेला नै प्रतिष्पर्धा हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी नै थियो । के काम गर्दा बजारमा स्थापित हुन सकिन्छ भनेर हेर्ने हो । ठुला माछाले सानो माछालाई खान्छ भन्ने हो भने त साना माछाहरु समाप्त हुनुपर्ने हो तर ठुला र साना दुबै खाले माछाको अस्थित्व कायमै छ ।
अर्थात बािणज्य बैंक वा विकास बैंकहरुको आक्रामक बजार विस्तारले फाइनान्स कम्पनीहरुलाई कुनै असर गर्दैन् । सबैले आफ्नो योजना र क्षेत्रभित्रका काम गर्ने हो । बजारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर राम्रो सेवा दिन सकियो भने कुनै समस्या आउँदैन र अहिलेसम्म वित्त कम्पनीहरुमाथी अस्थित्व रक्षाका लागि कुनै दबाव छैन् ।
हामी प्रतिष्पर्धासँग डराएका छैनौं र डराउँदैनौं पनि । प्रतिष्पर्धा भनेको सेवाको गुणस्तरका लागि हो, आफ्नो अस्थित्व रक्षाका लागि हो । अहिले पनि ऋण लिनु पर्यो भने कुन शाखामा आफुले चिनेको मेनेजर छ भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । त्यसकारण पनि प्रतिष्पर्धासँग डराउनै पर्दैन् । हामीले लाइसेन्स लिँदा नै प्रतिष्पर्धा थियो । सर्भाइवल अफ फिटेस्टको सिद्धान्तकै कारण आफ हामी अस्थित्वमा छौं र यो अस्थित्व निरन्तर कायम रहनेछ ।
मतलब, अहिले फाइनान्स कम्पनीहरुले अस्थित्व रक्षाका लागि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन् ?
फाइनान्स कम्पनीहरुले मात्रै होइन, क, ख, ग र घ वर्गका कुनै पनि कम्पनीले अस्थित्व रक्षाका लागि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन् ।
2019-05-02 - 219 view(s) - bikashnews